တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရုံးခန်းအမှတ် ၂ တွင် ယနေ့ နံနက် (၀၈း၃၀) အချိန်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီး ဦးမျိုးတင့်က အမှာစကားပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ အားလုံးပါဝင်သော စုံညီခုံရုံးသည် ယနေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ် ရုံးခန်းအမှတ် (၁) ၌ ရုံးထိုင်၍ ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၄) မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှု (၂) မှုတို့ကို စီရင်ချက်ချမှတ်သည်။ ထို့ပြင် ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၃) မှုနှင့် တရားမ အထူးအယူခံမှု (၂)မှု တို့ကို ကြားနာခဲ့ကြပါသည်။
Read more about ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ဒိန်းမတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အရ Judicial Accountability "TOT" အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် ဒိန်းမတ်-မြန်မာအစီအစဉ်အရ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ပထမနှစ် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၈)ပါ မြန်မာနိုင်ငံတရားသူကြီးများအတွက် တရားစီရင်ရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း (Judicial Accountability "TOT" Workshop) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Hilton Hotel၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
Read more about ဒိန်းမတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အရ Judicial Accountability "TOT" အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး " ပထမအကြိမ် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေးအကြီးအကဲများ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ " နှင့် " အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနေ့အခမ်းအနား " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး " ပထမအကြိမ် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေးအကြီးအကဲများ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ " နှင့် " အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနေ့အခမ်းအနား " သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ခုနှစ်၊ တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ်မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၉- ခုနှစ်) မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီက နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် ကျင်းပမည့် “ဘင်းစတက်နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေးအကြီးအကဲများ၏ ပထမအကြိမ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနေ့အခမ်းအနား” သို့ တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် ကျင်းပမည့် “ဘင်းစတက်နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေးအကြီးအကဲများ၏ ပထမအကြိမ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနေ့အခမ်းအနား” သို့ တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ
ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာအလယ်အလတ်အဆင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၃
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ လေ့ကျင့်ဌာနနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာအလယ်အလတ်အဆင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည် (၀၂း၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး (အောက်ထပ်အစည်းအဝေးခန်းမ) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Read more about ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာအလယ်အလတ်အဆင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ လေ့ကျင့်ဌာနနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည် (၀၂း၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး (အောက်ထပ်အစည်းအဝေးခန်းမ) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Read more about ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Scot Marciel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၅
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Scot Marciel အား ယနေ့နံနက် (၀၉:၄၅)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ဧည့်ခန်းမ တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Read more about ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Scot Marciel အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Chief Justice Cheep Jullamon ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွါ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးလာရောက်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Chief Justice Cheep Jullamon ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းကလေကြောင်း ခရီးဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးလာရောက်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Chief Justice Cheep Jullamon ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Hon. Justice Soros Suwannett သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် ညပိုင်းက ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော် ကြည်ညိုခဲ့ပါသည်။
တရားရုံးစစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း ဆရာဖြစ်သင်တန်း ကျင်းပပြုလုပ်
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ USAID-PRLM တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် အတွက် Training of Trainers on Court Surveys သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို Kempinski ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပသည်။